technical and Fundamental of market(technical and Fundamental of market) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
technical and Fundamental of market
बजारमा करेक्सन सकिएकै हो ? यस्तो छ पहिले र अहिलेको बढाइमा प्राविधिक भिन्नता
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । यो साताको दुई कारोबार दिनमा मात्रै सेयर बजार ११५ अंकले बढेको छ। ३२०० विन्दुभन्दा माथिबाट घट्न थालेको बजार न्युन विन्दु २५११ बाट अहिलेसम्म १६१ अंकले उकालो लागिसकेको छ। आज कारोबारसँगै भोलुम पनि बढेकोले आधारभूत रुपमा पनि बजार केही बलियो भएको बुझ्न सकिन्छ। प्राविधिक रुपमा पनि आजको बढाइमा केही अन्तर...
सेयर बजारको आगामी यात्रा सुखद् रहने संकेत (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । केही समयदेखि सेयर बजारमा कारोबार तथा इन्डेक्स दुवैमा गिरावट आइरहेको छ। अघिल्लो साता केही बढेको बजारले फेरि ओरालो यात्रा तय गरेपछि लगानीकर्तामा सेयर बजारको भविष्यलाई लिएर अन्यौलता छाउनु स्वाभाविक नै हो। यो साता पनि बजारमा कारोबारको दुवै दिन इन्डेक्स र भोलुम दुवै गिरावट आएको छ। प्राविधिक रुपमा...
यदि बजार २४६० भन्दा माथिबाटै फर्किएमा ४३०० सम्म पुग्नसक्ने (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आएको रौनक केही दिनयता क्रमशः हराउँदै गएको छ। बजारमा कारोबार रकम र सेयरको भोलुम दुवै घट्दै गएको देखिन्छ। मूल्यरेखाले ‘लोअर लो’ बनाएको अवस्था रहेको छ। यसले बजारमा बिक्रीचाप परेको बुझिन्छ। प्राविधिक रुपमा बजार पटक–पटक माथि जान खोजेको तर बोलिंगर ब्यान्डको तल्लो विन्दुलाई नै छुन...
निरन्तर घटिरहेको बजारको अबको सपोर्ट कति–कतिमा ? (प्राविधिक प्रक्षेपणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। सेयर बजारमा विभिन्न औजारले फरक–फरक सिग्नल देखाएका हुन्छन्। केही दिनदेखि ठूलो अंकले घटेको बजारमा अब सपोर्ट कतिमा होला र अझै कति अंकले घट्ला ? भन्ने सबैमा जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यही जिज्ञासा मेट्ने उद्देश्यले आज हामीले केही विश्व बजारमा चलेका औजारका आधारमा बजारको प्रक्षेपण गर्ने कोसिस गरेका छ�...
कहाँबाट होला सेयर बजारको यूटर्न ? यस्तो छ प्राविधिक प्रक्षेपण
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । केही दिनदेखि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। बजारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि खस्किँदै गइरहेको छ। बजार बढेपछि घट्ने र घटेपछि बढ्नु स्वाभाविक नै हो। अहिलेको घटाइले पनि बजार थप मजबुत भएर माथि नै जाने आधार निर्माण हुँदै गरेको अवस्था छ। आज हामीले कारोबार र भोलुमका आधारमा बनेका रेखाचित्रका...
सेयर बजारको आगामी यात्रा कस्तो रहला ? यस्ता छन् २ सम्भावना (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। प्राविधिक रुपमा सेयर बजारलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा गत साताको अन्तिम कारोबार दिनमा मैनबत्ती विश्लेषणअन्तर्गत इन्भर्टेड ह्याम्मर बनेको थियो। यस्तो चित्रले बजारले बाटो परिवर्तन गर्न लागेको संकेत गर्छ। यदि बढ्दो बजारमा इन्भर्टेड ह्याम्मर बन्छ भने बजार घट्छ र घट्दो बजारमा बन्छ भने बजार बढ्छ भन्ने नै...
प्राविधिक रुपमा सेयर बजारको आगामी यात्रा सुखद् रहने संकेत, कतिसम्म पुग्ला ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । लामो समय निरन्तर घटेको सेयर बजारमा आज गतिलो बाउन्स ब्याक भएको छ। बजार अघिल्लो दिनको न्यून विन्दु २७७५ मा टेवा लिएर फर्केको हो। यसअघि पनि बजार यही विन्दुमा टेवा लिएर फर्केको थियो। आज कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयरभाउमा सुधार आएको छ। योसँगै सेतो मारुबुजु मैनबत्ती बनेकोले बजारको अबको बाटो...
प्राविधिक रुपमा सेयर बजारमा अझै करेक्सनको सम्भावना, कुन सेक्टरको अवस्था कस्तो ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । गत साता सेयर बजारमा ३ दिनमात्रै कारोबार भएको थियो। यी ३ दिनमा बजारमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको देखिन्छ। यो साता पनि कारोबारको पहिलो दिन आइतबार बजारमा भारी करेक्सन आयो। तर साढे १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भएको छ। यसले बजार मजबुत नै रहेको संकेत गर्छ। सेयर बजार सधैँ बढ्याबढै...
काठमाण्डौ। विगत केही दिनयतादेखि सक्रिय रहेको मनसुन क्रमशः कमजोर हुँदै जाने भएको छ। पूर्वी तराईको भूभाग नजिक रहेको मनसुनको न्यून चापीय रेखा आजदेखि नेपालबाट बाहिरिने क्रम सुरुआत भएकासँगै मनसुन विस्तारै कमजोर हुँदै जाने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिए। हाल देशभर सामान्यदेखि...
करेक्सन हुँदै बजार ३५०० सम्म पुग्नसक्ने, कुन–कुन सेक्टर चम्केला ? (प्राविधिक प्रक्षेपणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । गत साताको सेयर बजारलाई समग्र रुपमा अध्ययन गर्दा कारोबार र भोलुमले साथ दिएको देखिन्छ। यसले बजार निकै मजबुत रहेको संकेत गर्छ। गत साताभरि सेयर बजारमा ९७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भयो। यो हिसाबले ५ दिनको कारोबार दिनमा दैनिक औसत १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर किनबेच भएको देखिन्छ�...
बजारले करेक्सन वा साइडवेजको बाटो लिएको हो? (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा यो साताको पहिलो दिनै हालसम्मकै उच्च २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएको छ। कारोबार रकमले कायम गरेको नयाँ कीर्तिमानले बजार निकै बलियो रहेको बुझ्न सकिन्छ। आज हामीले समग्र बजारको अवस्थालाई विभिन्न प्राविधिक औजारबाट केलाउने कोसिस गरेका छौँ। ती प्राविधिक औजारमध्ये अल्पकालीन औजारहरुले...
यस्तो हुनसक्छ सेयर बजारको आगामी यात्रा (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । केही दिनदेखि सेयर बजारमा सामान्य उतारचढावमात्रै देखिएको छ। कारोबार र भोलुम दुवै मजबुत नै छन्। प्राविधिक रुपमा भन्नुपर्दा बजारमा ठूलो उतारचढावको कुनै संकेत देखिन्न। बजार लामो समय बढेकोले सामान्य साइडवेज तथा करेक्सनको सम्भावना सधैँ रहेको देखिन्छ। हाल लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिसकेको अवस्था...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा यो साताको सुरुआत पनि सुखद् नै रह्यो। साताको पहिलो दिनको कारोबार उत्साहजनक रह्यो भने दोस्रो दिनको कारोबारमा सामन्य करेक्सन आएको छ। बजार आधारभूत रुपमा जति बलियो छ, प्राविधिक रुपमा पनि बलियो नै देखिन्छ। केही अल्पकालीन औजारहरुले सामान्य करेक्सन देखिए पनि दीर्घकालीन औजरहरुले बजार बुलिस नै...
आगामी दिनमा सेयर बजार करेक्सन हुँदै ३२०० सम्म पुग्नसक्ने (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । यो साताको पहिलो कारोबार दिनमा सेयर बजारमा ९७ अंकको वृद्धि भयो। दोस्रो कारोबार दिन पनि बजार सकारात्मक नै रह्यो। दीर्घकालीन रुपमा बजार बुलिस नै भएको कारोबार तथा भोलुमका माध्यमबाट बुझ्न सकिन्छ। प्राविधिक रुपमा भन्नुपर्दा केही औजारले अबको सेयर कारोबारमा अल्पकालीन रुपमा सामान्य करेक्सनको सम्भावना...
के सेयर बजार २५०० मा झर्दैछ ? प्राविधिक कोणबाट देखियो निराशाजनक संकेत
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । केही समय साइडवेजमा रहेको सेयर बजार साताको पहिलो दिन आइतबार झन्डै ७५ अंक बढ्यो। आज सोमबार पनि सुरुआती चरणमा बढेको बजार अन्ततः झन्डै ४५ अंकले घटेर बन्द भयो। बजार घटबढ हुने कारण जे भए पनि प्राविधिक भाषामा आज सेयर बजारले रातो मारुबुजु मैनबत्ती बनाएको छ। यसले बजार केही दिन अझै साइडवेज जान सक्ने तथा बजारमा...
विद्युतीय कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि, पहिलो त्रैमासमा एनसीएचएलबाट रु. ४१.२ खर्बको कारोबार
नेपाल सेवा र विन लघुवित्तको एकीकृत कारोबार कात्तिक १५ बाट
बैंक अफ काठमाण्डूको लाभांश घोषणा
लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
आलोचनाबीच फेसबुकको कमाइ बढ्यो, तेस्रो त्रैमासमा ९ अर्ब डलर नाफा